Barnaamijyada Dhalinyarada - Somalione
Shaqadeena Barnaamijyada Dhalinyarada
Waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 70% dadka soomaaliyeed in ay da’doodu ka yartahay 30 jir. Sidoo kale in kabadan kala bar (1/2) tirada dadka dalka ku nool waxay da’doodu ka hooseysaa 18 jir. Hadana sida dhacda dhalinyarada Soomaaliyeed waa la gacan bidxeyey ama la xaqirayba marka laga eego dhanka dhaqaalaha iyo siyaasadaba arrintaasooy ugu wacantahay habdhaqan bulsho oo ahmiyadda siiya da’da weyn taasoo ah caqabad xadideysa ka qeyb qaadashada dhalinyarada hormarinta iyo xasilinta Soomaaliya.
Intaa waxaa sii dheer, inta badan dadaalada ay wadaan bulshada caalamka eeku aadan xasilinta, maamulka iyo dib u dhiska Soomaaliya ayaa waxaa ahmiyadda la siiyay siyaasiyiin kooban iyo oday dhaqameed . ka qeyb galin la’aanta dhalinyarada Somaaliyeed ee arrimaha siyaasada iyo dhaqaalaha ayaa caqabad ku noqday nabada, xasillonida iyo hormarka dalka.
Somali One waxay la tashan doontaa isla markaana si wanaagsan u hawlgelin doontaa dhalinyaradasi lo horumariyo xasillonni iyo ka wada qeyb qaadashada arrimaha dhaqan-dhaqaale iyo siyaasadeed.
Kenya-Somalia Maritime Dispute Heads for World Court September 13, 2019
Somaliland's Quest to Defuse a Climate Timebomb September 13, 2019
FESOJ Condemns Crackdown Against Journalists in Somaliland September 13, 2019
UN and World Bank Call for Sustained Funding to Relieve Suffering September 13, 2019
Somaliland Opposition Denounces Government Crackdown in Indipendent Media September 13, 2019
Closed Roads in Mogadishu Set to Be Re-Opened September 13, 2019
Delegation From Germany Visits Southwest State September 13, 2019
Military Court Sentences 2 Militants to Death Penalty and Life in Imprisonment September 13, 2019
11 People Arrested for Child Smuggling September 13, 2019
UN, World Bank Call for Sustained Funding to Relieve Suffering September 13, 2019